मेरो जीवनको ठूलो जिज्ञासा र लगाव के रह्यो भने ब्रह्माण्ड के हो, यसको उत्पत्ति कसरी भयो ? बच्चा हुँदा घरको बार्दलीमा सुतेर आकाशतिर टोलाएर यी तारा के हुन् भन्ने कौतूहल हुन्थ्यो। जब स्कुल र कलेजमा विज्ञान पढ्न थालियो, यो भौतक जगत् कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने बुझ्ने अवसर भयो। मेरो एकखालको रुचि नै ब्रह्माण्ड (कस्मोलोजी) विषयमा अध्ययन गर्ने रह्यो।
आइन्स्टाइनको ‘जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी’ अर्थात् सापेक्षताको सिद्धान्तले नै स्पेस (देश) र टाइम (काल) को ‘क्वान्टिनियम’ (एकरूपता)को रूपमा संसारलाई बुझ्न सिकाएको हो। ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्दै जाने क्रममा ६०/७० को दशकमा भौतिकशास्त्रीहरूले ‘बिगब्याङ थ्योरी’ आविष्कार गरे। योे सिद्धान्त भन्छ कि आजभन्दा १३.७ अर्ब वर्षपहिले एउटा ठूलो धमाकाको रूपमा ब्रह्माण्ड बन्यो। त्यसैमा आधारित भएर स्टेफिन हकिङले पहिला अक्सफोर्डमा र पछि क्याम्ब्रिजमा यस विषयमा अझ गहन अध्ययन गरे। उनले आफ्नो थेसिसको विषय पनि ब्रह्माण्डलाई नै बनाए। ब्रह्माण्डका नियमहरू अध्ययन गर्दै जाने क्रममा उनले ‘ब्ल्याक होल’ का सिद्धान्तहरू विकास गरे।
१३.७ अर्ब बर्ष वर्षपहिले यो ब्रह्माण्ड उत्पत्ति भयो, चार अर्ब वर्षपहिले सूर्यबाट पृथ्वी उत्पन्न भयो, दुई अर्ब वर्षपहिले प्रारम्भिक जीवहरू उत्पत्ति भए भनिन्छ। तपाईं कल्पना गर्नुस्, जीवहरू उत्पत्ति भएको दुई अर्ब वर्ष भइसक्यो। मान्छेका रूपमा परिवर्तन भएको एक लाख वर्ष भयो। यसरी बुझ्ने चेतना प्राप्त गरेको कति भयो ? ग्यालिलियो र कोपर्निकसहरूले ब्रह्माण्ड बुझ्न थालेको पाँच सय वर्ष पनि भएको छैन। आइन्स्टाइनहरू आएको सय वर्ष भयो। यति छोटो समयमा हामीले यो ज्ञान प्राप्त गर्दै छौं।
रोचक कुरा के छ भने, म्याक्स प्ल्यांक नामका वैज्ञानिक भन्छन्, धर्म र विज्ञानबीच समानता के हुन्छ भने धर्मको निम्ति भगवान् पहिला आउँछ। यो ब्रह्माण्डको सृष्टि भगवान्ले ग‍र्‍यो भनेर यो सुरु हुन्छ। तर, वैज्ञानिकका लागि भगवान् अन्तिममा आउँछ। गर्दै गयो कयौं कुरा बाँकी हुन्छ, बुझिँदैन। अनि उसले अन्तिममा पत्ता लगाउन बाँकी कुरालाई ‘गड नोज’ भनेर छोड्दिन्छ। मानिसले जति ज्ञान प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई मानवजातिको ज्ञानको पछिल्लो क्षितिजसम्म पुर्‍याउनका निम्ति उनले ठूलो योगदान गरे। उनलाई एक आदर्श व्यक्तित्व र हाम्रो जीवनकालका अत्यन्त विलक्षण वैज्ञानिकका रूपमा विश्वले सम्झिरहनेछ।
कुराकानी : रविराज बराल/अजवी पौड्याल